ဒေါက်တာဇော်စိုး အမှာစာ – Min Thayt
စာဖတ်သမားသို့ / စာအုပ်အတွက် ၊
ဆရာ ဒေါက်တာဇော်စိုး၏ စာရေးသူအတွက် အမှာစာ။
မင်းသေ့ ……. နာမည်အရင်းက အောင်ကိုကိုတိုး ….
စာရေးဆရာဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်နဲ့ ထိုက်တန်သူ….
စာရေးခြင်းအလုပ်ကို တပ်မက်သူ …..
စာပေလောကမှာ နေရာတစ်နေရာဆုတ်ကိုင် ပိုင်ဆိုင်ထားသူ …….
ပြီးတော့ ….. ထူးပြီးမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုသူ …….။
လွန်ခဲ့သောငါးနှစ်က… မန္တလေးတက္ကသိုလ် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနက တာဝန်ယူပြီးဖွင့်ထားတဲ့ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဒီပလိုမာသင်တန်း (DIR) ပထမအသုတ်မှာ တက်ခဲ့လို့ တရင်းတနှီး ရှိခဲ့တယ်။ ဘောင်ခတ်တာမကြိုက် ဖောက်ထွက် ဖြန့်ကြက်တွေးချင်သူ တွေးရဲသူ သဘောတရားရေးနဲ့ လက်တွေ့ကို ချိတ်ဆက်ကြည့်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ သတိထားမိခဲ့တယ်။
ဆရာတပည့်ဆိုတာထက် အကိုကြီးနဲ့ ညီငယ်လို ဆက်ဆံပေါင်းသင်းမိတယ်။ တစ်ခါတလေ နိုင်ငံရေးကို ဆွေးနွေးကြရင် ဆွေးနွေးဘက်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သူပါ။ အခုလည်း ရေစက်ကမကုန် မန္တလေးတက္ကသိုလ် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာဌာနက ဖွင့်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေးပညာလေ့လာမှုမဟာသင်တန်း (MPolS) ပထမသုတ်မှာ တက်ရောက်လေ့လာနေဆဲ။ စာဖတ်အားကောင်းသူ စာဖတ်နာသူအဖြစ် ဆက်လက်ရှင်သန်ဆဲ။ စာဖတ် စာရေးနေရရင် ဘဝကို မေ့ထားဆဲ မေ့ထားနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။
ပုံရိပ်တွေကိုမြင်ရုံ တွေ့ရုံနဲ့တင် ရပ်မနေ တန့်မနေပဲ အတွင်းထိ စူးစူးရှရှ ကြည့်တတ်တဲ့ဓလေ့ မင်းသေ့မှာ ရှိတယ်။ စာတစ်အုပ် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ရင် လေးလေးနက်နက်ဖတ်ရုံသာမက အဲ့ဒီစာအုပ် အဲ့ဒီ့ဆောင်းပါးရေးတဲ့ စာရေးဆရာရဲ့စိတ်အထိ လိုက်ဖတ်တဲ့ အရည်အချင်းမျိုး စာရေးဆရာ မင်းသေ့မှာ တွေ့ရတယ်။
“စာဖတ်သမားသို့” စာအုပ်မှာ စာဖတ်သူတွေ အထူးသဖြင့် လူငယ်စာဖတ်သူတွေအတွက် စေတနာထားထားတဲ့ စာဖတ်နည်း နှစ်ပုဒ်ကိုရေးထားတယ်။ မင်းသေ့က သူလက်တွေ့လုပ်တဲ့နည်းကို လူငယ်စာဖတ်သူတွေကို မျှဝေထားတာ အကြံပြုထားတာ နည်းပေးထားတာ။ တစ်ပုဒ်က “များများဖတ်ဖို့ထက် နာနာဖတ်ဖို့” နဲ့ နောက်တစ်ပုဒ်က “ကြေညက်အောင် ဖတ်”။ နှစ်ပုဒ်စလုံးက နည်းနည်းတိုပေမယ့် မင်းသေ့ရဲ့ စေတနာက မတိုဘူး။
စာအုပ်အညွှန်းအပိုင်းမှာ စာရေးဆရာဦးအေးမောင် ရေးထားတဲ့ “ဗီဇနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်” ကို မင်းသေ့က “အညမညသဘော” ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဖတ်ညွှန်းရေးထားတာ။ ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲ မင်းသေ့က ကြေအောင် နာအောင်ဖတ်ထားတော့ စာအုပ်ဆိုလိုရင်းသာမက မူရင်းစာရေးသူရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကိုပါ လှမ်းဖတ်တာ။ ဒါနဲ့တင်မဟုတ် ကိုယ့်လူက ဦးအေးမောင်ရဲ့စာအုပ်နဲ့ ဦးချစ်လှိုင်ရဲ့ အညမညသဘောတရားနဲ့ ဆက်နွှယ်မှုရှိ/မရှိကို ဆက်လေ့လာဖို့ အကြံပြုထားသေးတာ။
နောက် မင်းသေ့စာအုပ် ဖတ်ပြီး ခေါင်းထဲကျန်ရစ်တာက ဆရာကျော်ဝင်းရဲ့ အဂတိလိုက်စားမှု စာအုပ်ကို မင်းသေ့က “သူခိုးကြီးတိုက်ဖျက်ရေး” ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဖတ်ညွှန်းရေးထားအပုဒ်လေး။ လက်ရှိ နိုင်ငံ့အရေးကို ထင်ဟပ်ပြထားတာ။ သူ့ရဲ့အတွေး သူရဲ့ရှုထောင့်ပါ ဖြည့်စွက်ထားတယ်။ ထူးခြားတာက သူပေးထားတဲ့ ခေါင်းစဉ် ” သူခိုးကြီး တိုက်ဖျက်ရေး”။ အဲ့လို တစ်တစ်ခွခွ ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ် စာဖတ်သူကို တန်းကနဲမြင်သာအောင် ပြောတာ။ ရိုင်းတယ် ကလပ်တယ် ထင်ကောင်းထင်မယ်၊ ဒါပေသိ အားပါတယ် ရှင်းတယ် ရိုးတယ် ဖတ်ကြည့်ပါ တစ်စုံတရာအမြင်ရမယ်လို့ အာမခံတယ်။
နောက်တစ်ပိုင်းက သူ ထိတွေ့ဖူးသူများ၊ သူနဲ့ရင်ဘတ်ချင်းနီးသူများ သို့တည်းမဟုတ် သူ လေးစား အားကျရသူများရဲ့ ရုပ်ပုံလွှာ သို့မဟုတ် ပုံရိပ်တွေကို ရေးခြစ်ထားတယ်။ မင်းသေ့…… စေ့စပ်တယ်၊ ထိမိတယ်၊ စေတနာပါတယ်၊ မြင်တတ်လွန်းတယ်၊ ကြည့်တတ်လွန်းတယ်။ သုံးတဲ့စကားလုံးတွေက ခေါင်းစဉ်မှာ နာမည်တပ်မထားရင်တောင် ထင်းကနဲ လင်းကနဲ မြင်သိအောင် လုပ်နိုင်စွမ်းတယ်။
မင်းသေ့ရေ…. အများကြီး ဂုဏ်ယူပါတယ်။
ဘယ်သူတွေရဲ့ ပုံရိပ်တွေဆိုတာ မပြောတော့ဘူး စာရေးဆရာမင်းသေ့ ရေးခြစ်ထားတာ ပုံပျက်သွားမှာစိုးလို့။ ဖတ်ကြည့်ပါလို့ပဲ လေးလေးနက်နက် တိုက်တွန်းပါရစေ။ နောက်ဆုံးအပိုင်းလို့ ပြောရမလား…. “စာဖတ်သမားသို့” စာအုပ်ရဲ့အနှစ် (ကျနော့် ထင်မြင်ယူဆချက်ပါ) လို့ ပြောရမလားပဲ။ ပညာဆိုတာကို မင်းသေ့က အကိုးအကားနဲ့ စူးစူးနစ်နစ် သူဖြတ်သန်းခဲ့၊ သူဖြတ်သန်းနေဆဲဖြစ်တဲ့ ပညာဝန်းကျင်ကို အပြုသဘောနဲ့ ရေးခြစ်ထားတာ။ သုတေသနစိတ်ထား၊ သုတေသနအမြင်၊ သုတေသနထုံး၊ သုတေသနတန်ဖိုး။ ဒါတွေကို ထောက်ပြဆွေးနွေးသွားတာ။ ထပ်ပြီးဂုဏ်ယူပါတယ် မင်းသေ့ရေ။
အထူးအကြံပြု အားပေးချင်တာက…. စာဖတ်သူတွေ… အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကို ပိုင်စိုးတဲ့… လူငယ်စာဖတ်သူတွေ…. မင်းသေ့ရဲ့ “စာဖတ်သမားသို့” စာအုပ်ကို ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြပါလို့… မင်းသေ့က… မိတ်ဆက်စရာမလိုတော့တဲ့ စာရေးဆရာပါ…။ တကယ်မိတ်ဆက်ဖို့လိုတာက… ကျနော်ကိုယ်၌ပါ… ကျနော့်နာမည် ဇော်စိုးပါ…. မန္တလေးတက္ကသိုလ် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာနဲ့ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာဌာနက ဆရာတစ်ယောက်ပါ။
နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာ ၊ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာဌာန ၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ် ။
၂၀ ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၊ ၂၀၁၉ ။
Tagged BOOK Worm, New Book, Preface, To Reader, Zaw Soe
Previous post @ တည်နေရာ ရန်ကုန် ကန်စွန်းရွက် အက်ဆေး
Next post သင့်နော်အမှာစာ